Amaphoyisa achitha imibiko yokuthunjwa kwezingane ePitoli | News24
Amaphoyisa achitha imibiko yokuthunjwa kwezingane ePitoli
Pretoria - Okhulumela amaphoyisa uCaptain uStephen Maluleka uyichithile imibiko yokuthunjwa kwezingane kwesinye sezitolo ezidayisa impahla yokugqoka enxanxatheleni yezitolo, iWonderpark, ePitoli.
Lokhu kuza ngemuva kokuba kusabalale inkulumo eqoshiwe enkundleni zokuxhumana iWhatsApp eMabopane, kuzwakala owesifazane etshela abantu ukuthi sekuthunjwe inqwaba yezingane esitolo sakwaMr Price ngoMsombuluko.
Udaba lokuthunjwa kwezingane eMabopane, eHebron naseSoshanguve beluzungeza ezinkundleni zokuxhumana isikhathi esingaphezu kwesonto. Kodwa amaphoyisa athi azikho izigameko ezifana nalezi ezibikiwe.
Ngesonto eledlule, udaba lwamadoda ahamba ngetekisi yohlobo lweToyota Quantum eMabopane okusolwa ukuthi athumba izingane enkulisa beluzungeza nalo ezinkundleni zokuxhumana.
Yize kunjalo, amaphoyisa akhiphe isitatimedne echitha izinsolo zokuthunjwa kwezingane endaweni.
"Sifisa ukucacisa ukuthi awekho amacala okuthunjwa kwezingane ezikoleni avuliwe noma aphenywayo eziteshini zamaphoyisa ezilandelayo ezingaphansi kweTshwane North Cluster; e-Akasia, eDube, eGa-Rankuwe, eHammanskraal, eLoato, eMabopane, ePretoria North, eRietgat, eSoshanguve naseTemba," kufundeka isitatimende.
Amaphoyisa acela amalungu omphakathi nezingane zesikole ukuba aqaphele futhi azibhekisise izindawo akuzo ngaso sonke isikhathi.
Isikhulumi samaphoyisa aseNorth Cluster sichaze le nkulumo eqoshiwe njengezindaba ezingamampunge saphinde sakhuthaza abantu ukuba bangazisabalalisi.
Amaphoyisa axwayise abantu ukuthi bangazisabalalisi izinkulumo eziqoshiwe njengoba zidala itwetwe ngokungenasidingo.